ShweMinThar: January 2019
💢 MWD: ရဲယိုပင်ရဲ့ သဘောသဘာဝလေးကို အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါ ဆရာ..
Dr.KML: ရဲယိုပင်ကို အင်္ဂလိပ်လို Noni လို့ခေါ်ပါတယ်.. Indian Mulberry လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်.. ရုက္ခဗေဒအခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် Morinda citrifolia ဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်ငယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ၁၀ ပေ ပတ်ဝန်းကျင်အထိ မြင့်ပါတယ်.. အချို့ သိပ်နှစ်ကြာရင်တော့ ၁၅ ပေ၊ ပေ၂၀ လောက် အထိမြင့်နိုင်ပါတယ်.. အထူးသဖြင့် ပူအိုက်စွတ်စိုတဲ့ရာသီဥတုကိုနှစ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ပေါက်ပါတယ်.. တောင်ပေါ်ဒေသမှာတော့ ဖြစ်ထွန်းလေ့မရှိပါဘူး.. ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရဲယိုသီးကို စီးပွားဖြစ်အမြောက်အများစိုက်တဲ့နေရာကတော့ ဟာဝိုင်အီ (Hawaii) ကျွန်းစုဒေသဖြစ်ပါတယ်.. ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ အီကွေတာနဲ့နီးပြီး ပင်လယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့ မြေပြန့်ဒေသတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်.. မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ သူရဲ့မူရင်းဒေသဖြစ်ပါတယ်.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ကမှ Hawaii ကိုရောက်ရှိတယ်လို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုကို ဆေးဖက်ဝင်အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ဘယ်အပိုင်းကို အသုံးပြုပါသလဲ ဆရာ.. ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးအနေနဲ့ကော ဘယ်လိုများအသုံးပြုပါသလဲ ဆရာ..
Dr.KML: အပင်တစ်ပင်လုံးကတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဓိကအသုံးပြုနိုင်တာကတော့ အသီးဖြစ်ပါတယ်.. တစ်ခါတစ်ရံမှာ အရွက်ကိုသုံးလေ့ရှိပြီး အချို့ရောဂါတွေမှာတော့ အမြစ်ကို အသုံးပြုရလေ့ရှိပါတယ်.. ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးပညာမှာတော့ အနာကျက်မြန်အောင် အရိုးကျိုးတဲ့အခါမှာ ဆက်တာမြန်အောင်၊ မူးတာအန်တာ သက်သာအောင်၊ ပါးစပ်အနံ့ဆိုးတာ၊ အသံဝင်တာ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါစသဖြင့် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်.. နောက်ပိုင်းမှာ ၀မ်းကိုက်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနဲ့ ဓမ္မတာလာစဉ် ကိုက်ခဲတဲ့ရောဂါတွေမှာပါ အသုံးပြုလာကြတာ တွေ့ရပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုသီးဟာ ဆေးဖက်ဝင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ် ဆရာ.. ဘယ်လိုမျိုးဓာတ်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာ သိပါရစေ..
Dr.KML: ရဲယိုသီးမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို အဓိကအုပ်စု (၂) ခု ခွဲနိုင်ပါတယ်.. ပထမအုပ်စုကတော့ အာဟာရဓာတ်တွေပေးတဲ့အုပ်စု တစ်နည်းအားဖြင့် Nutrition အုပ်စုဖြစ်ပြီး ဒုတိယအနေနဲ့တော့ ဆေးဖက်ဝင်အာနိသင်ကိုပေးတဲ့အုပ်စု တစ်နည်းအားဖြင့် Phytochemical အုပ်စုဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုသီးမှာ ဘယ်လိုမျိုးအာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်သလဲဆိုတာ သိပါရစေ..
Dr.KML: ဒီနေရာမှာ ရဲယိုသီးကိုအစိမ်းအတိုင်းစားတာရယ်၊ အခြောက်ခံအမှုန့်ပြုလုပ်ပြီးစားတာရယ် Noni juice အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးစားတာရယ် ကွာခြားမှုရှိပါတယ်.. ရဲယိုသီးအစိမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို တိုင်းတာတဲ့အခါမှာ အခြောက်ခံအမှုန့်ပြုလုပ်ပြီးမှ တိုင်းတာလေ့ရှိတာမို့လို့ ရဲယိုသီး၏အခြောက်မှုန့်မှာပါဝင်တဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးကို မူတည်ပြီးတော့ပဲ တင်ပြပါမယ်..
အဓိကအုပ်စု (၂) စုခွဲနိုင်ပါတယ်..
(၁) Macronutrient (အများဆုံးပါဝင်သောအာဟာရဓာတ်များ)
*ရဲယိုသီးဟာ အဆီပါဝင်မှုမရှိတဲ့ (<1 fiber="" p="">
(၂) ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေပါဝင်မှုကိုကြည့်ရင် အများဆုံးပါဝင်တာကတော့
Potassium 30 mg/g
Vitamin C9mg/g…….တို့ဖြစ်ပါတယ်
Niacin (Vitamin B3) 40 ug/g
Provitamin A2lu/g
Calcium 800 ug/g
Iron 20 ug/g ……တို့ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်အနေနဲ့ သူ့မှာ Potassium ပါဝင်မှုများတဲ့အတွက် ကျောက်ကပ်မကောင်းလို့ သွေးထဲမှာနဂိုကတည်းက Potassium များတဲ့သူတွေဟာ ရဲယိုသီးကို အစိမ်းအတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရဲယိုသီးဖျော်ရည်၊ ရဲယိုသီးဆေးတောင့်တွေကို မစားသင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.. ကျန်တဲ့ Potassium ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းစိမ်းရေတွေ ရှောင်သလိုမျိုး ရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: ဆေးဖက်ဝင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းလည်း သိပါရစေ ဆရာ..
Dr.KML: ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေအနက် အရေးအပါဆုံးတွေကတော့
(3) Scopoletin တို့ဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: Xeroninie အကြောင်းလည်း အသေးစိတ်သိပါရစေ..
Dr.KML: Xeronine ဆိုတာ အပင်ကရတဲ့ Alkaloid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနည်းငယ်သာလိုအပ်တဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. Picogram range သာလိုအပ်ပြီး လွန်စွာမှအစွမ်းထက်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်က ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ Protein molecule တွေရဲ့ Shape and rigidity ကို control လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်.. Protein တွေ ဟော်မုန်းတွေ သူ့အလုပ်သူ ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ Xeronine လိုအပ်ပါတယ်.. သူတို့တွေပုံမှန်မဖြစ်ခဲ့ရင် ကင်ဆာရောဂါအပါအ၀င် ရောဂါပေါင်းများစွာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.. အဲ့ဒီလိုတဲ့ Xeronine ကို ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့ အသီးအနှံတွေက နေရပါတယ်.. အသားတွေ ငါးတွေကနေ မရနိုင်ပါဘူး.. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အပင်တွေအားလုံးထဲမှာ Xeronine ပါဝင်မှုအများဆုံးကတော့ ရဲယိုပင်ဖြစ်ပြီး အသီးမှာ အများဆုံးပါဝင်ပါတယ်.. ဒုတိယပါဝင်မှုအများဆုံးကတော့ နာနတ်သီးဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ရဲယိုသီးမှာပါဝင်မှုက နာနတ်သီးထက် by weight အရပြောရင် အဆ ရှစ်စ ပိုများပါတယ်..
ရဲယိုသီးမှာ တကယ်ပါဝင်နေတာက Xeronine အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ရင်Xeronine အဖြစ်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့ Proxeronine အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ကိုစားရင် Proxeronine တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အထဲကိုရောက်ပြီး အူနံရံကနေစုပ်ယူပြီးတော့ အသည်းမှာသိုလှောင်ထားလိုက်ပါတယ်.. ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်ပြီဆိုမှ အသည်းမှာရှိတဲ့ Proxeronine တွေဟာ လိုအပ်တဲ့ tissue တွေဆီကို ရောက်သွားပါတယ်.. အဲ့ဒီမှာ Proxeronase ဆိုတဲ့အင်ဇိုင်းတွေက Proxeronine ကနေ Xeronine အဖြစ်ကို ပြောင်းလိုက်ပါတယ်.. ပြီးမှ Xeronine အဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်.. အထူးသဖြင့် ရောဂါဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ဆဲလ် (dead cells) တွေ Metabolites တွေကို ဖယ်ထုတ်ရာမှာ များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်..
💢 MWD: အဲ့ဒီ Xeronine ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကို ဘယ်သူကနေစပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါလဲ ဆရာ..
Dr.KML: Xeronine ကို စတင်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သူကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့ University of Hawaii က Professor Dr Ralph Hernicke (MD, Ph.D) ဖြစ်ပါတယ်.. 1972 ခုနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အသီးအနှံတွေထဲမှာရှိတဲ့ Xeronine တွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့နည်းပညာကိုပါ တီထွင်ခဲ့သူအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်.. အမေရိကားမှာရှိတဲ့ Biochemist တွေထဲမှာတော့ ထင်ရှားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: ကျန်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်း၂ ခုကို ဆက်ပြောပါဦး ဆရာ..
Dr.KML: Anthraquinones ဆိုတာကတော့ Phenolic compound ဖြစ်ပြီး ကာဗွန် atom ၁၄ ခု C 14 (C6-C2-C6) နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်.. Flavonoid နဲ့နီးစပ်ပါတယ်.. ကာဗွန်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်လိုက်ရင် C15 (C6-C3-C6) ဖြစ်ရင် Flavonoid ဖြစ်သွားပါပြီ.. အဓိကအားဖြင့် Antibacterial action ကိုပေးပါတယ်.. ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေနိုင်လို့ ရဲယိုသီးကိုစားရင် နှာခေါင်းမှာဖြစ်တဲ့ ထိပ်ကပ်နာ (sinusitis) နဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ (respiratory tract infection) တွေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်.. Antiviral action ပါရှိလို့ အခုဆိုရင် HIV virus ပေါ်မှာ အာနိသင်ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို ပညာရှင်တွေက လေ့လာလျက်ရှိပါတယ်..
နောက်တစ်ခုကတော့ Scopoletin ဖြစ်ပါတယ်.. သူ့ကိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ သွေးကြောတွေကိုကျယ်စေပါတယ်.. ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အာနိသင် (Antimicrobial action) ရှိပါတယ်.. Anti-histamine effect ရှိလို့ နှာခေါင်းပိတ်တာတွေ သက်သာစေနိုင်ပါတယ် .. ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါတွေ သက်သာစေပါတယ်.. အခုနောက်ပိုင်း အော်ဇိုင်းမားရောဂါမှာ သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက် သုတေသနတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုသီးစားရင် ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုပါသလဲ ဆရာ..
Dr.KML: ရဲယိုသီးစားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရဲယိုသီးအမှုန့်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆေးတောင့်တွေသောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Noni juice အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်မှန်စားခဲ့သောက်ခဲ့ရင် ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့
(၁) ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ပေးပါတယ်.. ကင်ဆာရောဂါသည်တွေ သောက်မယ်ဆိုရင်လည်း နာကျင်မှုတွေသက်သာပြီး အကျိုးရှိပါတယ်..
(၂) စိတ်ရွှင်လန်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကနေ ကင်းဝေးလျော့ပါးစေပါတယ်.. အထူးသဖြင့် အရိုးကျီးပေါင်းတက်တဲ့ဝေဒနာတွေကို သက်သာစေပါတယ်..
(၃) သွေးတိုရောဂါကို သက်သာစေပြီး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်..
(၄) နာတာရှည်ထိပ်ကပ်နာရောဂါကို သက်သာစေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်ရောက်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်..
(၅) HIV လူနာတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ဖြည့်စွက်စာ Food supplement ဖြစ်ပါတယ်.. ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေလို့ ဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုသီးဟာ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်၊ ကုသရေးမှာ အထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုတယ်ဆိုတာလည်း ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ..
Dr.KML: ဒီကနေ့ ကင်ဆာရောဂါကိုကုသတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုတဲ့ဆေးဝါးအများစုဟာလည်း အပင်ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ်.. ဥပမာ Vincristine တို့ Vinblastine တို့ဟာ မုန်တိုင်ပင်ကနေ ထုတ်ယူတာဖြစ်ပြီး Texol ဆိုရင် ကျောက်ထင်းရူးပင်ကနေ ထုတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအပင်တွေဟာ လူစားသုံးလို့မရတဲ့အပင်တွေဖြစ်တော့ side effect လည်း များပါတယ်.. ရဲယိုကျတော့ အရင်ကတည်းက စားသုံးလို့ရတဲ့အသီးဖြစ်တော့ တစ်နည်းအားဖြင့် side effect များစွာလျော့နည်းမှာ သေချာပါတယ်.. အာနိသင်ရှိဖို့ကိုပဲ သေသေချာချာစမ်းသပ်ဖို့ လိုပါတယ်..
ရဲယိုဟာ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်၊ ကုသရေးမှာ အစွမ်းအာနိသင်ရှိ/မရှိ ဦးဆောင်လေ့လာခဲ့တဲ့ဌာနကတော့ University of Hawaii မှာရှိတဲ့ Department of Pharmacology (ဆေးဝါးဗေဒဌာန) နဲ့ Department of Pathology (ရောဂါဗေဒဌာန) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.. Honolulu မှာရှိတဲ့ အဲဒီတက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေဟာ ရဲယိုထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို ဓာတ်ခွဲဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး တစ်ခုချင်းစီးရဲ့အာနိသင်ကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်.. ပထမဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းမှာရှိတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေပေါ်မှာ အာနိသင်တိုင်းပါတယ်.. ပြီးတော့မှ ကြွက်ကလေးတွေအပေါ်မှာ စမ်းသပ်ပါတယ်.. နောက်ဆုံး လူမှာစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုတွေက အတော်လေးကို အားရဖို့ကောင်းပါတယ်.. ကင်ဆာဆဲလ်တွေပြန့်ပွားမှုကို ရဲယိုကဟန့်တားနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်.. မကြာမီကာလမှာ ရဲယိုကနေထုတ်လုပ်တဲ့ ကင်ဆာဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက် ပေါ်ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကြားထဲမှာတော့ ရဲယိုသီးကိုအစိမ်းအတိုင်းဖြစ်ဖြစ် Noni Juice အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Noni power ကို capsule ထဲထည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Food supplement အနေနဲ့ ကင်ဆာကာကွယ်ရေးမှာ သောက်ထားနိုင်သလို ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေအနေနဲ့လည်း Supplement အနေနဲ့စားမယ်ဆိုရင် အကျိုးများနိုင်ပါတယ်..
💢 MWD: ကင်ဆာဆိုတာလည်း မျိုးစုံရှိတော့ ဘယ်လိုမျိုးကင်ဆာတွေကို အထောက်အကူပြုစေနိုင်တာပါလဲ ဆရာ..
Dr.KML: University of Hawaii နဲ့ Illinois University တွေမှာ လေ့လာချက်အရ အဆုတ်ကင်ဆာ (Lung cancer) ၊ အသည်းကင်ဆာ (Liver cancer) နဲ့ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာ (Kidney cancer) တွေပေါ်မှာ ဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်.. ဆက်လက်ပြီးလည်း သုတေသနတွေပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုသီးစားရင် စိတ်ရွှင်လန်းစေတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ ဆရာ..
Dr.KML: ရဲယိုသီးမှာပါတဲ့ Xeronine ဟာ စိတ်ကိုရွှင်လန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်.. သူဟာ alkaloid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးေ က်ာဖီ၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ရင် စိတ်ရွှင်လန်းစေတဲ့ အာနိသင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. ပိုပြီးထူးခြားတာက ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ နာကျင်မှုတွေကိုပါ သက်သာစေတဲ့အတွက် ခုနကင်ဆာရောဂါရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ နာကျင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုမှာ ရောင်ရမ်းလို့နာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရဲယိုသီးက လျော့ပါးစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်.. လည်းပင်းကျီးပေါင်းတက်လို့နာနေရင် ရဲယိုကိုစားလိုက်ရင် နာကျင်မှုသက်သာပြီး ပေါ့ပါးသွားသလိုမျိုး ခံစားရပါတယ်.. ကျီးပေါင်းပျောက်အောင်ကတော့ တခြား treatment တွေပါ ရောပေးဖို့လိုပါတယ်.. ရဲယိုတစ်ခုတည်းစားရုံနဲ့ကျီးပေါင်းမပျောက်နိုင်ပါဘူး..
💢 MWD: သွေးတိုးနဲ့ နှလုံးရောဂါတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုလည်း သိပါရစေ..
Dr.KML: ရဲယိုသီးစားရင် သွေးကြောလေးတွေကျယ်လာပြီး သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်.. ဒါကြောင့် ပူတဲ့အသိကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်.. ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါနဲ့ သွေးကြောကျဉ်ရောဂါတွေမှာ အကျိုးရှိတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ.. အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းကတော့ Scopoletin တွေဖြစ်ပါတယ်..
💢 MWD: နာတာရှည်ထိပ်ကပ်နာ (Chronic sinusitis) ဝေဒနာသည်တွေအတွက်ရော ဆရာ..
Dr.KML: Chronic sinusitis ဟာ အင်မတန်မှ ကုလို့ခက်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်.. ရဲယိုသီးကိုစားရင် အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ Anthroquinone တွေကြောင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်.. အမြဲစွဲသောက်ရင် Bacteria တွေဝင်မလာနိုင်အောင် ဟန့်တားပေးပါတယ်.. Penicillin သောက်ပြီး လေးဖက်နာပိုးဝင်မလာအောင် ဟန့်တားထားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်.. နောက်တစ်ခုကပါဝင်တဲ့ Xeronine တွေကလည်း ထိပ်ကပ်နာကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်..
နောက်တတိယအနေနဲ့ Antihistamine အာနိသင်ရှိတာကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်၊ နှာခေါင်းယားတာတွေ သက်သာစေပါတယ်.. သူ့မှာပါတဲ့ သဘာဝဗီတာမင်စီဟာလည်း နှာခေါင်းအနာကျက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်.. ဒီအချက်တွေကြောင့် နာတာရှည်ထိပ်ကပ်နာ ဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ ရဲယိုသီးစားရင်စား၊ မစားနိုင်လျှင် ဆေးတောင့်ကို မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် စွဲသောက်သင့်ပါတယ်..
💢 MWD: ရဲယိုဟာ HIV လူနာတွေအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးရှိပါသလဲ ဆရာ..
Dr.KML: ဒါကတော့ စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်.. ဒီကနေ့အသုံးပြုတဲ့ HIV ဆေးတွေဟာလည်း ရာနှုန်းပြည့် အားကိုးနိုင်တာမဟုတ်လေတော့ သဘာဝသစ်သီးသစ်ဖုတွေမှာရှိတဲ့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဟန့်တားနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့ အပင်တွေကို သုတေသနပြုလုပ်ရာမှာ ရဲယိုဟာ ရှေ့တန်းကပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်..
ကနဦးလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ Noni ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကို မြင့်တက်စေနိုင်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်.. ဒါကြောင့် ခုခံအားကျသူတွေ၊ မကြာခဏဖျားနာသူတွေအနေနဲ့ Noni စားရင် အကျိုးရှိပါတယ်.. HIV ပျောက်တယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ကြောင်း သိဖို့လိုပါတယ်..
💢 MWD: ဆရာတို့ FAME အနေနဲ့ ရဲယိုသီးကနေ သဘာဝဆေး ထုတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ဆရာ.. အဲဒါလေးလည်း ရှင်းပြပေးပါ..
Dr.KML: ဆရာတို့ FAME အနေနဲ့ ရဲယိုသီးဟာ အစိမ်းအတိုင်းစားရင် အာနိသင်ထက်မြက်တာမှန်ပေမယ့် အနံ့ပြင်းလွန်းတာကြောင့် လူအများစုက စားဖို့တွန့်ကြပါတယ်.. အချို့လဲထန်းလျက်တို့၊ သကြားတို့၊ ဆားတို့နဲ့တော့ စားကြပါတယ်.. အဲ့ဒီအတွက် အဆင်ပြေအောင် မူလအာနိသင်မပျက်စေဘဲ အသီးကိုစနစ်တကျခူးယူပြီး အမှည့်မလွန်ခင်မှာ အမှုန့်ဖြစ်အောင် လုပ်ရပါတယ်.. ပြီးမှCapsule ထဲထည့်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.. ဆေးတောင်တစ်တောင့်မှာ ရဲယိုသီးအမှုန့် 500 mg ပါဝင်ပါတယ်.. ပုံမှန်အားဖြင့် မနက်တစ်တောင့် ညတစ်တောင့် အစားမစားမီသောက်ရပါမယ်.. အဓိကအားဖြင့် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ရေနွေးကြမ်းတွေနဲ့ မသောက်ရပါဘူး.. ရေနဲ့သောက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ရေနွေးကြမ်းမှာပါဝင်တဲ့ caffeine ဓာတ်ဟာ Proxeronine တွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်..
Credit: ဒေါက်တာခင်မောင်လွင် (FAME Pharmaceuticals)
#MWD Health Talk Programme
Posted by Alex Aung at 3:00 AM No comments:
အဆီကျပီးကြွက်သားကြီးထွားစေဖို့ လိုက်နာရမယ့်နည်းလမ်း ၁၀ မျိုး
ယနေ့မျက်မှောက်ကာလမှာ အများစုဟာအဆီကျ၊ ဝိတ်ချခြင်းကိုဓါတ်စာပြောင်းလဲစားသောက်လိုက်ရုံ (သို့မဟုတ်)စက်ပေါ်မှာပြေးလ်ိုက်ရုံနဲ့ဘဲ အဆီတွေကအချိန်တိုအတွင်းလျော့ကျလိမ့်မယ်လို့ မှားယွင်းစွာတွေးထင်မိကြပါတယ်။ (you won’t get instant results from any diet on the planet or running on the machine) Diet လုပ်ပီးရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ်လောက်ကျော်လွန်လာအချိန်မှာ စိတ်ပျက်ငြီးးတွားခြင်းကအစပြုလာပါပီ။ စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြပီးကိုယ်ခန္ဓာမှအဆီပိုများလျော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်မဖြစ်လာချိန်မှာအားမလိုအားမရဖြစ်ပီး သင်ဟာအမှားတွေကိုပြုလုပ်မိနိုင်တယ်။ စိတ်ရှည်၊ ဇွဲသန်၍ရေရှည်တစိုက်မတ်မတ်လုပ်နိုင်မှ သင်မျှော်လင့်တဲ့ ရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
အဆီကျပီးကြွက်သားကြီးထွားဖို့ လိုက်နာရမယ့်မယ့်အချက် ၁၀ ချက်ကတော့
၁- သင်နှင့်သင့်တော်မည့် ဓါတ်စာကိုရွေးချယ်စားသောက်ပါ။
သူများစားလို့လိုက်စားတာမျိုးမဖြစ်စေပါနဲ့။ သင့်ခန္ဓာလိုအပ်ချက်နှင့်တခြားသူခန္ဓာလိုအပ်ချက်ချင်းမတူညီနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကို သိနိုင်အောင်ကြိုးစားပီး သင်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်အတွက်သံသယရှိနေပီဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ဓါတ်စာကိုသင့်တော်သလိုပြောင်းလဲစားသောက်ပါ။ ပြောင်းလဲစားသောက်ရာမှာ အပါတ်စဉ်တိုင်းဓါတ်စာပြောင်းလဲစားသောက်ခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပါတ် ၈ ပါတ် (၂လ) အတွင်း သင့်ခန္ဓာကိုယ် ပြောင်းလဲမူနှင့်လိုအပ်မူ့ကို ဆန်းစစ်နေပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနေ့တာဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်အတွက် ကယ်လိုရီ(လောင်စာ)စွမ်းအင်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိပ်ယာမှနိုးထချိန်မှ ၁ နာရီအတွင်း မပျက်မကွက် နံနက်စာကိုစားသုံးယူသင့်ပါတယ်။ ဗိုက်ပြည့်ရန်အတွက်စားသုံးခြင်းမဖြစ်စေရန် သတိအမြဲချပ်ပါ။ နေ့သစ်တရက်အတွက် လုံလောက်သောစွမ်းအင်အဟာရ မဖြည့်တင်းနိုင်ခဲ့လျှင်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသိုလှောင်ထားသော ကြွက်သားများရဲ့စွမ်းအင်ကို ထုတ်ယူအသုံးပြုပါတယ်။ ခက်ခဲစွာတည်ဆောက်ယူထားတဲ့ ကြွက်သားများဟာ မနက်စာစားသုံးယူဖို့ ပျက်ကွက်မူ့ကြောင့် ကြီးထွားမူ့နှုန်းလျော့ရဲဆုတ်ယုတ်သွားပါတယ်။
၃- ပြောင်းလဲမူ့နှေးကွေးခြင်းကို စိတ်ရှည်၊သီးခံပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အသစ်ပြောင်းလဲစားသောက်၊ နေထိုင်မူ့နှင့်အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေဖို့ အနည်းဆုံးအချိန် ၄-၅ ပတ်လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ပုံစံကို မကြာခဏပြောင်းလဲခြင်းဟာ အဆီကျဖို့ထက် အဆီတိုးစေဖို့အခွင့်အလမ်းများလာပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့အတွက်ကတော့ အစာကိုအတိုင်းအတာနှင့်ပုံမှန်စွဲမြဲတည်တန့်စွာစားသောက်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ယူရပါတယ်။ စားသောက်နေထိုင်မူ့မကြာခဏပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေဟာ ကမောက်ကမဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမူ့လျော့ကျ၍ အဆီပိုများကိုထိရောက်စွာမချေဖြတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
၄- ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ပါ။ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာပါ။
အချိန်မမှန်စားခြင်း အလျင်းသင့်သလိုစားသောက်ခြင်းဟာ အကြီးမားဆုံးရန်သူပါ။ မည်သို့သောရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်စေ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆက်မပျက်ပြောင်းလဲမူ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွက် ထုံစံအတိုင်း တနေ့ ၃ ကြိမ်စားသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် နည်းနည်းနှင့်မကြာခဏစားခြင်းကိုကျင့်သုံးပါ။ အစားအသောက်မစားခြင်းကိုတော့ အထူးရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ပိန်ချင်တာ/အဆီချချင်တာ အစားအစားဘာ့ကြောင့် ခဏခဏစားဖို့တိုက်တွန်းရတာလဲ? မကြာခဏ၊ အနည်းငယ်ပမာဏကို ခွဲယူစားသုံးခြင်းဖြင့် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကို အစဉ်မပျက်ဖြစ်ပေါ်စေ၍ ပိုလျံတဲ့ကယ်လိုရီများကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းမူ့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
စားသုံးယူတဲ့ ကယ်လိုပမာဏကို စစ်တမ်းယူထားတဲ့ အလေ့အကျင့်ပြုလုပ်ပါ။ အချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှ အလေ့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပါ။
ဥပမာ။ ။ ထမင်းဆိုင်အပြင်အဆင် ထမင်းဖြူ ၁ ပန်းကန်= ၂၀၃.၅ ကယ်လိုရီ ပျမ်းမျှခြင်းပါဝင်ပါတယ်။ ၄ ကယ်လိုရီဟာ ၁ ဂရမ် (ပရိုတိန်း) နှင့်ညီမျှပါတယ်။
ကယ်လိုရီဟာခန္ဓာယန္တရားလည်ပတ်ဖို့အတွက် ဓါတ်ဆီနဲ့တူတဲ့လောင်စာပါ။ ပျမ်းမျှခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီး လူတစ်ယောက်အတွက် ကယ်လိုရီ ၁၀၀၀-၁၄၀၀ အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်/လိင်/အနိမ့်-အမြင့် နှင့်အလေးချိန်အပေါ်မူတည်ပီး ကယ်လိုရီ လိုအပ်ချက်(BMR)ကို တွက်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။
Google.com မှာ BMR တွက်ချက်နည်းကို အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ကယ်လိုရီထက် ပိုမိုစားသုံးခဲ့ရင် အပိုကယ်လိုရီတွေဟာ မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်မူတည်၍ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနေရာရာမှာ အဆီအဖြစ်စုဝေးနေမှာပါ။ (မေးအောက်၊ ပေါင်၊ တင်ပါး၊ ခါး၊ ဝမ်းဗိုက်)
၃၅၀၀ ကယ်လိုရီ = ၁ ပေါင် (အဆီ)
၁၀၀၀ ကယ်လိုရီ =၀.၂၈ ပေါင် (၂၈ အောင်စ)
၅၀၀ ကယ်လိုရီ = ၀.၁၄ ပေါင် (၁၄ အောင်စ)
၆- အစားအစာအမျိုးမျိုးကို စားသုံးပါ။
ဖြည့်စွက်စာဆိုသည်မှာ လိုအပ်သည့်အဟာရကိုဖြည့်စွက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ စားသောက်နေမြဲအစားစားကိုမစားဘဲ ဖြည့်စွက်စာတခုတည်းစားသုံးသည့်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သော အဟာရပြည်စုံသည်ဟုအဓိပ္ပါယ်လွဲမှားစွာမယူဆသင့်ပါ။ အသား(ပရိုတိန်း)နှင့်အတူ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ်+အမျှင်ဓါတ် (Fiber) များပါဝင်သော အဆန်/အစေ့၊ အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရွက်မျိုးစုံပါ ပူတွဲစားသုံးယူပါ။
၇- တရားလွန်အဆီပါဝင်သော အစားအစာရှောင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။
ကာယအလှတည်ဆောက်နေသူများ အလေးချိန်လျော့ချဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အဆီ(မပြည့်ဝအဆီ)ဟုခေါ်သော Mono Unsaturated Fatty acids သည် မကောင်းသောကိုလက်စထရောဖြစ်စဉ်ကိုတားမြစ်နိုင်သော အဆီအက်စစ်ကိုအသားနှင့်အခွံမာသီးများ၊ ထောပတ်သီတို့မှလည်းရရှိ၍ အိုမီဂါ -၃ အဆီအက်စစ်ကိုတော့ ငါးများထံမရရှိနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သောအဆီများဟာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆီကိုတရားလွန်ရှောင်ရှားခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးမဖြစ်စေဘဲ အဆီကျ/ကြွက်သားကြီးထွားခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ အလွန်အကျွံမဖြစ်အောင်ထိန်းချူပ်၍ မျှတစွာစားပေးပါ။
ပရိုတိန်း၊ ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်ဗီတာမင်ဒီ ပါဝင်သောအစားအသောက်များကို ဂရုတစိုက်စားသုံးပါ။ ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကယ်လိုလီလောင်ကျွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ပရိုတိန်းလိုအပ်သလို အရိုးများသန်မာစေရန်အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်ဗီတာမင်ဒီဟာလည်းမရှိမဖြစ်အရေးပါ၍ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ အလွန့်အကျွံစားသုံးခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်အမြဲတစေသတိချပ်ပါ။
ရေသောက်ခြင်းဖြင့် ဆာလောင်မူ့ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သလို ကယ်လိုရီလောင်ကြွမ်းမူ့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ တနေ့ရေ ၀.၅ လီတာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ၂၃ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ တနှစ်တာ (၃၆၅ ရက်) ရေ ၀.၅ လီတာသောက်သုံးခြင်းဖြင့် ၁၇၀၀၀ ကယ်လိုရီ (သို့) အဆီ၂ ကီလို (၄.၄ပေါင်)လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သူတေသနစစ်တမ်းကောက်ယူချက်များအရ ရေ ၁-၁.၅ လီတာနေ့စဉ်သောက်သုံးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်လျော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၁၀- ကိုယ်အလေးချိန်စက်တွင် မကြာခဏချိန်ခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ပါ။
အလေးချိန်လျော့ချနေသူတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာမကြာခဏ အလေးချိန်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ ထိုအလေ့အကျင့်က သင့်ကိုကျေနပ်စေဖို့ထက် စိတ်ပျက်/ကုန်စေဖို့ အဆိုးဘက်ကိုရောက်ရှိစေပါတယ်။ ဝိတ်အနည်းငယ်လျော့ကျတာကို သိရှိခြင်းဖြင့် စိတ်ကိုယ်အလိုလိုက်ကာ စားချင်စိတ်များပေါ်ပေါက်လာမှာပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကောင်းမွန်သော အကျင့်စရိုက်များကို မကျိုးပေါက်အောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် မျှော်မှန်းထားသော က်ိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကြွက်သားအလှများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော ဝိတ်ကျ Diet Plan အစားအသောက် (Gym ကစားနေသူများအနေဖြင့် (ပရိုတိန်းရှိတ် ၃၀-ဂရမ်) ဖြင့်တွဲ၍စားသုံးပါ)
သင်နှင့် သင့်တော်မည်ထင်လျှင် လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်အသုံးပြုပါ။
ပေါင်မုန့်မီးကင် ၁ ချပ် + ထောပတ်မြေပဲ သုပ်
ဂရိတ်ဖရုအသီး ၁ ခြမ်း
ဘလက်ကော်ဖီ စစ်စစ် ၁ ခွက် (သကြားမပါ)
ပေါင်မုန့်မီးကင် ၁ ချပ်
အမဲသားကင် ၃ အောင်စ
ပဲသီးစိမ်း ၁ ခွက်
ငှက်ပျောသီး ၁ ဝက်
ပန်းသီး ၁ လုံး
ဗနီလာ ရေခဲမုန့် ၁ ခွက်
ကြက်ဥပြုတ် ၁ လုံး
ဘီစကစ် ၅ ချပ်
ချိစ် ၁ ချပ်
ကြက်အူချောင်း ၂ ခု
မုန်လာဥနီအသေးပြုတ် ၁ ပန်းကန်လုံး
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ၁ ပန်းကန်လုံး
Day 1 မှပြန်စပါ။
၂၆ ဂျွန်လ ၂၀၁၆ (SGT 12:38)]
Gender ဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးရင် သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ယောကျာ်းဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်၊ မိန်းမဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် ယောကျာ်းဆိုတာ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိရတယ်၊ မိန်းမဆိုတာ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေရမယ် စတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေကို Gender လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် ဘာဖြစ်လဲ၊ ဘာလို့ ဒါတွေကို အရေးတယူလုပ် ပြောနေရတာလဲ။
မိန်းကလေးမို့လို့ လင်ကောင်းသားကောင်းရရင် တော်ပါပြီ ဆိုပြီး ကျောင်းထုတ်လိုက်ရာကနေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မာနမင်းသားလေး ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်၊ အပြင်မှာချိန်း၊ ဟိုတယ်သွား၊ ကိုယ်ဝန်ရ၊ အဲ့ကတည်းက မာနမင်းသားလေးကိုလည်း ရှာမရတော့ဘဲ ဒုက္ခရောက်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကြားသိနေရသမျှ အကြမ်းဖက်မှု၊ အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှု၊ နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေအားလုံးဟာ ဒီအမြင်တွေကနေ မြစ်ဖျားခံတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေ ပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောနေရတာ။
များသောအားဖြင့်တော့ ဒီအမြင်တွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေက ပြဿနာဖြစ်ကြရတာ ပိုများပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းလေးတွေမှာလည်း ထိခိုက်ရတာတွေ ရှိတယ်။
‘ယောကျာ်းမှန်ရင်’ ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ အဲဒါတွေကို ထည့်ထားကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒါတွေက ယောကျာ်းဖြစ်ခြင်း၊ မိန်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ သောက်ချင်တဲ့သူက သောက်မှာပဲ၊ စားချင်တဲ့သူက စားမှာပဲ၊ မသောက်ချင် မစားချင်တဲ့သူကလည်း မသောက်ဘူး၊ မစားဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို ဆေးလိပ်မသောက်၊ ကွမ်းမစား၊ အရက်မသောက်တတ်ရင် ယောကျာ်းမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ နောက်ပြောင်ခံရတယ်။ တကယ်ဆို အမျိုးသမီးတွေလည်း ဒီလို သောက်လို့ရတယ်ဆိုရင် အမျိုးသားတွေထဲမှာလည်း မသောက်တတ်တဲ့သူ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ လက်ခံပေးရမှာပေါ့။
၂။ ဘာမဆို လုပ်တတ်ရမယ်
“ယောကျာ်းဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်တောင် မစီးတတ်ဘူးလား”၊ “သားယောကျာ်းလေး မွေးထားတာ ဒါလေးတောင် အားမကိုးရဘူး” စသဖြင့် ပြောတတ်ကြတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း တူတူပဲ၊ ဆိုင်ကယ်စီးတတ်တာ၊ ဘောလုံးကန်တတ်တာ၊ မီးချောင်း လဲတတ်တာ၊ ဒါတွေဟာ အရည်အချင်းပဲ၊ Skill ပဲ။ သင်ရင် တတ်မယ်၊ မသင်ရင်၊ မလေ့ကျင့်ရင် မတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းဆိုရင် တတ်ကိုတတ်ရမယ်လို့ မြင်နေကြတော့ ခက်တယ်။ ဘယ်အတတ်ပညာမဆို တတ်ထားရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းဖြစ်ရင် တတ်ကိုတတ်ထားရမယ် ဆိုတာကတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။
၃။ အလှအပ မကြိုက်ရဘူး
“ယောကျာ်းကြီးဖြစ်ပြီး မှန် အဲ့လောက်ကြိုက်ရလား”၊ “နုလိုက်တာလည်း လွန်ပါရော”၊ ဒီလိုမျိုးတွေ ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အလှအပကြိုက်တာ၊ ဖြစ်သလိုနေတတ်တာတွေကလည်း ကျားရယ် မရယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ မိန်းကလေးထဲမှာလည်း ဖြစ်သလို နေတတ်ပြီး အလှအပကို သိပ်ဂရုမစိုက်တတ်သူတွေ ရှိနေသလို၊ ယောကျာ်းလေးထဲမှာလည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကျော့ကျော့မော့မော့ နေချင်သူဆိုတာ ရှိနိုင်တာပါပဲ။
၄။ အကြောက်တရား ကင်းမဲ့ရမယ်၊ မငိုရဘူး
သရဲခြောက်တယ်ဆိုလည်း မကြောက်ရ၊ မြွေ၊ ပိုးဟပ်၊ ဖား စတဲ့ သေးသေးကြီးကြီး ဘယ်လိုသတ္တ၀ါမျိုးကိုမှ ယောကျာ်းက ကြောက်ခွင့်မရှိဘူး။ ကြောက်နေဦးတော့၊ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောခွင့်မရှိဘူး။ ၀မ်းနည်းစရာ တွေ့လည်း မငိုရဘူး။ “ယောကျာ်းဖြစ်ပြီး မျက်ရည်မကျနဲ့” တဲ့၊ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆုံးမခံခဲ့ကြရတယ်။
၅။ ရန်ဖြစ်ရဲရမယ်၊ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရမယ်
ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး လမ်းလျှောက်လာတယ်၊ အဲဒီမှာ တခြားကောင်လေး ၃ ယောက်လောက်က ကောင်မလေးကို ရိသဲ့သဲ့ပြောမယ်။ ဒါ ဘယ်သူမဆို ဒေါသထွက်မှာပဲ၊ တုံ့ပြန်ဖို့ လုပ်မယ်၊ ရန်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ဆိုတာ မြန်မာကား မဟုတ်တော့ ကိုယ်ကလည်း မင်းသား မဟုတ်သလို၊ ကိုယ့်ကို ရန်လာစတဲ့သူတွေကလည်း ကိုလူချောတို့အဖွဲ့ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ၃ ယောက် ၁ ယောက်ဆို ကိုယ်ခံရဖို့ များတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်တာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ ဒီလိုတွေးမိလို့ သည်းခံပြီး ထွက်လာလိုက်မယ် ဆိုပါတော့၊ ကောင်မလေးက ဘာပြောမလဲ၊ နင် ယောကျာ်းဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ချစ်သူတစ်ယောက်လုံးကိုတောင် အကာအကွယ် မပေးနိုင်ဘူး၊ နင့်ကို ငါဘယ်လိုအားကိုးရမလဲ တဲ့။
လူပျိုမစစ်တော့တဲ့ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ရလို့ ဘယ်သူကမှ နွားမလို့ မခေါ်ပေမယ့် အပျိုမစစ်တော့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ယူမိရင်တော့ ချို(ဂျို)ပေါက်နေပြီ၊ မြက်ကြိုက်လို့လား စသဖြင့် ပြောခံရတယ်။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကို လိုချင်လို့ ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး လှလှပပသုံးပြီး အယုံသွင်းတယ်၊ လိုချင်တာရပြီးတော့ ထားသွားတယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒါကို အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ လျှောက်ပြောနေတယ်၊ အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ လက်ရှိရည်းစားကိုလည်း မင်းက ငါ့အကျ တွဲရတဲ့ကောင်ပါကွာ ဆိုပြီး သွားပြောတယ်၊ အဲ့လိုယောကျာ်းကိုကျ အားကျနေကြပြီးတော့၊ ကောင်မလေးမှာ အတိတ်က ကိစ္စတွေ ရှိခဲ့တာ သိသိကြီးနဲ့ ဒါဟာ ဒီမိန်းကလေးရဲ့ တန်ဖိုးကို မကျစေသလို၊ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးမှာလည်း ဘာပြဿနာမှ မရှိဘူးလို့ ခံယူတဲ့အတွက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ ယောကျာ်းကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က နွားတံဆိပ်ကပ်တယ်။
ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တွေကြောင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးပဲ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေ လွှမ်းမိုးလာသလို၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတောင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တံဆိပ်ကပ်မှုကို မခံနိုင်လို့ အဆုံးသတ်လိုက်ရတဲ့ Relationship တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
၇။ သူများသားသမီးကို နှစ်ရှည်လများ တွဲပြီး ခုထိ မယူသေးဘူး
(ဒီနေရာမှာ လက်ထပ်မယ်လို့ အယုံသွင်းပြီး ကာမလိမ်လည်ရယူတာတွေ၊ အပျော်သက်သက် တွဲတာတွေကိုတော့ ထည့်မပြောပါဘူး။) ဒါက ရည်းစားသက်တမ်း ကြာလာရင် မိန်းကလေးဆိုတာ တန်ဖိုးကျကျလာတယ် ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ဆက်စပ်တယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာလည်း ဒီအမြင်ရဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတဲ့အတွက် နှစ်တွေကြာလာ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်သိလာလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူး ဆိုရင်တောင် မပြတ်ရဲတော့ဘူး၊ ဒီလိုပဲ ကြိတ်မှိတ်နေလိုက်ကြ၊ လက်ထပ်လိုက်ကြ၊ ကောင်လေး မူမမှန်တော့တာကိုတောင် အမျိုးမျိုး သည်းခံကြရနဲ့ ဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒီလိုပဲ၊ ယောကျာ်းလေးတွေကိုလည်း သူများသားသမီးကို ဒီလောက်နှစ်ရှည်လများ တွဲခဲ့ပြီး မယူသေးဘူးလားလို့ ပြောခံရတာပဲ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်ရင်လည်း လူမဆန်တဲ့ကောင်လို မြင်ကြတာ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာသူတို့ အဆင်မပြေလို့ လမ်းခွဲလိုက်တာ၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကသာ အဲ့လိုမျိုးတွေ ပြောနေကြတာ။
တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွှဲ့ရလာရင် မိန်းကလေးတွေက ပညာဆက်သင်ဖို့ အာရုံရှိနေချိန်၊ ယောကျာ်းလေးတွေက ငွေရှာဖို့ကို ပိုဦးစားပေးရတယ်။ ငါ သူများသားသမီးကို ယူပြီးရင် သူ့အဖေထားတာထက် မသာတောင် တင့်တင့်တယ်တယ်လေးတော့ ထားနိုင်မှ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
မိသားစုတစ်စုမှာ ယောကျာ်းက ပိုက်ဆံရှာပြီး မိန်းမက အိမ်ထောင်မှု ထိန်းသိမ်းတယ်ဆို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဘယ်သူကမှလည်း မိန်းမကို ယောကျာ်းပုဆိုးနား ခိုစားတယ်လို့ မပြောဘူး။ ဒါ သာမန်လို့ပဲ မြင်ကြတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာလည်း လုံခြုံမှုရှိတယ်။ ယောကျာ်းက အားကိုးရတယ်ပေါ့။ ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ မိန်းမက ပိုက်ဆံရှာပြီး ယောကျာ်းက နောက်ကပံ့ပိုးပေးမယ် ဆိုပါတော့။ သူတို့ဟာသူတို့ အဆင်ပြေနေရင်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောကြမယ်၊ မိန်းမထမီနား ခိုစားတယ် ဆိုပြီး။
ယောကျာ်း တော်တော်များများကလည်း ဒီအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်လုံခြုံမှု မရှိဘူး။ ကြာတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ထက်သာနေတဲ့ မိန်းမဖြစ်သူကို အလိုလိုနေရင်း ကြည့်မရတော့ဘူး။ သူနဲ့အတူတွဲလိုက်တိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု ပျောက်လာတယ်။ ဒီတော့ ဘုရင်မနားကနေ ခွာပြီး မိဖုရားရှာတယ်။ ဒီမိဖုရားဟာ ဘုရင်မလောက်လည်း မလှဘူး၊ မတော်ဘူး၊ ငွေကြေးမပြည့်စုံဘူး၊ ဒါပေမယ့် သူကတော့ ဘုရင်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
ဒါတွေက ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတဲ့ ဥပမာတချို့ပေါ့။ သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘာသွားတွေ့မလဲ ဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေကို ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့၊ ရုတ်တရက်ဆို ကျွန်တော်တို့ ယောကျာ်းတွေ အသာရနေတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ထိခိုက်စေနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို အပျိုစစ်ခြင်းနဲ့ တိုင်းတာနေတာကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို နွားဖြစ်စေတာ၊ ချိုပေါက်စေတာ။ နှစ်တွေကြာလာရင် မိန်းကလေးက တန်ဖိုးကျလာတယ် ဆိုတဲ့အမြင်ကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို နှမသားချင်း မစာနာတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာစေတာ။ “စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်း” ဆိုတာက အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေမရှိ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် မရပ်တည်နိုင်တော့ဘဲ ယောကျာ်းအနိုင်ကျင့်သမျှ ငြိမ်ခံရတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေသလို၊ ယောကျာ်းတွေအတွက်လည်း ငွေရှာကောင်းရမယ် ဆိုတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖြစ်စေတာ။ ကိုယ်များ မတော်တဆ အသက်ဆုံးပါးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်သားသမီးတွေနဲ့ ကိုယ့်မိသားစုကို ဘာမှမလုပ်တတ် မကိုင်တတ်နဲ့ ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့စေတာ။
ဒါကြောင့် ဒီလို လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာ ရှိနေတဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲ လိုအပ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အမျိုးသားတွေအတွက်လည်း လိုအပ်တယ်၊ ဒီအမြင်တွေကြောင့် အမျိုးသမီးတွေ ထိခိုက်နစ်နာရသလို၊ ဒီလိုဘောင်တစ်ခုထဲ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်မနေတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာလည်း ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံနေရတယ်၊ ဒီအမြင်တွေကြောင့် သူတို့တင် ထိခိုက်ခံစားနေရတာ မဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော်တို့လည်း နစ်နာနေရတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအမြင်တွေ လျော့နည်းပပျောက်သွားဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ နေရာမှာလည်း အမျိုးသားတွေကို ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ပါတယ်၊ ဒါမှပဲ ပိုမိုအောင်မြင်မှု ရလာမှာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဒီနှစ် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသားများနေ့ (International Men’s Day) အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ တင်ပြဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်။
(၂၄.၁၁.၂၀၁၈ ထုတ် Voice Weekly ပါ ဆောင်းပါး)
Gender ဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးရငျ သတျမှတျခကျြတှကေို ဆိုလိုတာပါ။ ယောကျြားဆိုတာ ဘယျလိုဖွဈရမယျ၊ မိနျးမဆိုတာ ဘယျလိုဖွဈရမယျ ဆိုပွီးတော့ပေါ့။ ဥပမာအားဖွငျ့ ယောကျြားဆိုတာ ဦးဆောငျနိုငျစှမျး ရှိရတယျ၊ မိနျးမဆိုတာ ဗိုငျးကောငျးကြောကျဖိနရေမယျ စတဲ့ သတျမှတျခကျြတှကေို Gender လို့ချေါပါတယျ။
ဒီလိုသတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ ဘာဖွဈလဲ၊ ဘာလို့ ဒါတှကေို အရေးတယူလုပျ ပွောနရေတာလဲ။
မိနျးကလေးမို့လို့ လငျကောငျးသားကောငျးရရငျ တျောပါပွီ ဆိုပွီး ကြောငျးထုတျလိုကျရာကနေ၊ ဖစျေ့ဘှတျမှာ မာနမငျးသားလေး ဆိုတဲ့အကောငျ့နဲ့ ရညျးစားဖွဈ၊ အပွငျမှာခြိနျး၊ ဟိုတယျသှား၊ ကိုယျဝနျရ၊ အဲ့ကတညျးက မာနမငျးသားလေးကိုလညျး ရှာမရတော့ဘဲ ဒုက်ခရောကျရတဲ့ အဖွဈမြိုးတှေ ရှိလာတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ကွားသိနရေသမြှ အကွမျးဖကျမှု၊ အနိုငျကငျြ့စျောကားမှု၊ နှိမျ့ခဆြကျဆံမှုတှအေားလုံးဟာ ဒီအမွငျတှကေနေ မွဈဖြားခံတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီသတျမှတျခကျြတှေ ပွငျဖို့လိုတယျလို့ ပွောနရေတာ။
မြားသောအားဖွငျ့တော့ ဒီအမွငျတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတှကေ ပွဿနာဖွဈကွရတာ ပိုမြားပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ ယောကျြားလေးတှမှောလညျး ထိခိုကျရတာတှေ ရှိတယျ။
စဉျးစားမိတဲ့ တခြို့ကို ရေးပွခငျြပါတယျ။
၁။ ဆေးလိပျ၊ အရကျ မသောကျတတျရငျ …
‘ယောကျြားမှနျရငျ’ ဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြတှထေဲမှာ အဲဒါတှကေို ထညျ့ထားကွတယျ။ တကယျတော့ ဒါတှကေ ယောကျြားဖွဈခွငျး၊ မိနျးမဖွဈခွငျးနဲ့ မဆိုငျဘူး၊ သောကျခငျြတဲ့သူက သောကျမှာပဲ၊ စားခငျြတဲ့သူက စားမှာပဲ၊ မသောကျခငျြ မစားခငျြတဲ့သူကလညျး မသောကျဘူး၊ မစားဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဲ့လို ဆေးလိပျမသောကျ၊ ကှမျးမစား၊ အရကျမသောကျတတျရငျ ယောကျြားမှ ဟုတျရဲ့လားလို့ နောကျပွောငျခံရတယျ။ တကယျဆို အမြိုးသမီးတှလေညျး ဒီလို သောကျလို့ရတယျဆိုရငျ အမြိုးသားတှထေဲမှာလညျး မသောကျတတျတဲ့သူ ရှိနိုငျတယျဆိုတာ လကျခံပေးရမှာပေါ့။
၂။ ဘာမဆို လုပျတတျရမယျ
“ယောကျြားဖွဈပွီး ဆိုငျကယျတောငျ မစီးတတျဘူးလား”၊ “သားယောကျြားလေး မှေးထားတာ ဒါလေးတောငျ အားမကိုးရဘူး” စသဖွငျ့ ပွောတတျကွတယျ။ ဒီနရောမှာလညျး တူတူပဲ၊ ဆိုငျကယျစီးတတျတာ၊ ဘောလုံးကနျတတျတာ၊ မီးခြောငျး လဲတတျတာ၊ ဒါတှဟော အရညျအခငျြးပဲ၊ Skill ပဲ။ သငျရငျ တတျမယျ၊ မသငျရငျ၊ မလကေ့ငျြ့ရငျ မတတျဘူး။ ဒါပမေယျ့ ယောကျြားဆိုရငျ တတျကိုတတျရမယျလို့ မွငျနကွေတော့ ခကျတယျ။ ဘယျအတတျပညာမဆို တတျထားရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့၊ ဒါပမေယျ့ ယောကျြားဖွဈရငျ တတျကိုတတျထားရမယျ ဆိုတာကတော့ အဓိပ်ပါယျမရှိပါဘူး။
၃။ အလှအပ မကွိုကျရဘူး
“ယောကျြားကွီးဖွဈပွီး မှနျ အဲ့လောကျကွိုကျရလား”၊ “နုလိုကျတာလညျး လှနျပါရော”၊ ဒီလိုမြိုးတှေ ပွောတတျကွတယျ။ တကယျတော့ အလှအပကွိုကျတာ၊ ဖွဈသလိုနတေတျတာတှကေလညျး ကြားရယျ မရယျနဲ့ မဆိုငျဘူး။ မိနျးကလေးထဲမှာလညျး ဖွဈသလို နတေတျပွီး အလှအပကို သိပျဂရုမစိုကျတတျသူတှေ ရှိနသေလို၊ ယောကျြားလေးထဲမှာလညျး သပျသပျရပျရပျ ကြော့ကြော့မော့မော့ နခေငျြသူဆိုတာ ရှိနိုငျတာပါပဲ။
၄။ အကွောကျတရား ကငျးမဲ့ရမယျ၊ မငိုရဘူး
သရဲခွောကျတယျဆိုလညျး မကွောကျရ၊ မွှေ၊ ပိုးဟပျ၊ ဖား စတဲ့ သေးသေးကွီးကွီး ဘယျလိုသတ်တဝါမြိုးကိုမှ ယောကျြားက ကွောကျခှငျ့မရှိဘူး။ ကွောကျနဦေးတော့၊ ပါးစပျကနေ ထုတျပွောခှငျ့မရှိဘူး။ ဝမျးနညျးစရာ တှလေ့ညျး မငိုရဘူး။ “ယောကျြားဖွဈပွီး မကျြရညျမကနြဲ့” တဲ့၊ ငယျငယျကတညျးက ဆုံးမခံခဲ့ကွရတယျ။
၅။ ရနျဖွဈရဲရမယျ၊ အကာအကှယျပေးနိုငျရမယျ
ကောငျလေးနဲ့ ကောငျမလေး လမျးလြှောကျလာတယျ၊ အဲဒီမှာ တခွားကောငျလေး ၃ ယောကျလောကျက ကောငျမလေးကို ရိသဲ့သဲ့ပွောမယျ။ ဒါ ဘယျသူမဆို ဒေါသထှကျမှာပဲ၊ တုံ့ပွနျဖို့ လုပျမယျ၊ ရနျဖွဈမယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျ့လကျတှဘေ့ဝဆိုတာ မွနျမာကား မဟုတျတော့ ကိုယျကလညျး မငျးသား မဟုတျသလို၊ ကိုယျ့ကို ရနျလာစတဲ့သူတှကေလညျး ကိုလူခြောတို့အဖှဲ့ မဟုတျဘူး။ ဒီတော့ ၃ ယောကျ ၁ ယောကျဆို ကိုယျခံရဖို့ မြားတယျ။ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈလာနိုငျတာတှလေညျး အမြားကွီးပဲ။ ဒီလိုတှေးမိလို့ သညျးခံပွီး ထှကျလာလိုကျမယျ ဆိုပါတော့၊ ကောငျမလေးက ဘာပွောမလဲ၊ နငျ ယောကျြားဖွဈပွီး ကိုယျ့ခဈြသူတဈယောကျလုံးကိုတောငျ အကာအကှယျ မပေးနိုငျဘူး၊ နငျ့ကို ငါဘယျလိုအားကိုးရမလဲ တဲ့။
လူပြိုမစဈတော့တဲ့ ယောကျြားလေးတဈယောကျကို လကျထပျရလို့ ဘယျသူကမှ နှားမလို့ မချေါပမေယျ့ အပြိုမစဈတော့တဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျကို ယူမိရငျတော့ ခြို(ဂြို)ပေါကျနပွေီ၊ မွကျကွိုကျလို့လား စသဖွငျ့ ပွောခံရတယျ။ ကောငျမလေးတဈယောကျရဲ့ အပြိုစငျဘဝကို လိုခငျြလို့ ခဈြတယျ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး လှလှပပသုံးပွီး အယုံသှငျးတယျ၊ လိုခငျြတာရပွီးတော့ ထားသှားတယျ၊ ပွီးတော့ အဲဒါကို အောငျမွငျမှုတဈခုလို ဂုဏျယူဝငျ့ကွှားစှာ လြှောကျပွောနတေယျ၊ အဲ့ကောငျမလေးရဲ့ လကျရှိရညျးစားကိုလညျး မငျးက ငါ့အကြ တှဲရတဲ့ကောငျပါကှာ ဆိုပွီး သှားပွောတယျ၊ အဲ့လိုယောကျြားကိုကြ အားကနြကွေပွီးတော့၊ ကောငျမလေးမှာ အတိတျက ကိစ်စတှေ ရှိခဲ့တာ သိသိကွီးနဲ့ ဒါဟာ ဒီမိနျးကလေးရဲ့ တနျဖိုးကို မကစြသေလို၊ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အခဈြရေးမှာလညျး ဘာပွဿနာမှ မရှိဘူးလို့ ခံယူတဲ့အတှကျ မွတျမွတျနိုးနိုးနဲ့ လကျထပျလိုကျတဲ့ ယောကျြားကိုတော့ ကြှနျတျောတို့က နှားတံဆိပျကပျတယျ။
ဒီလိုသတျမှတျခကျြတှကွေောငျ့ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ပထမဆုံးပဲ ဖွဈခငျြတယျ ဆိုတဲ့ အယူအဆတှေ လှမျးမိုးလာသလို၊ ကိုယျ့ဟာကိုယျ အဆငျပွပေါတယျဆိုတောငျ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ တံဆိပျကပျမှုကို မခံနိုငျလို့ အဆုံးသတျလိုကျရတဲ့ Relationship တှေ အမြားကွီးရှိနပေါတယျ။
၇။ သူမြားသားသမီးကို နှဈရှညျလမြား တှဲပွီး ခုထိ မယူသေးဘူး
(ဒီနရောမှာ လကျထပျမယျလို့ အယုံသှငျးပွီး ကာမလိမျလညျရယူတာတှေ၊ အပြျောသကျသကျ တှဲတာတှကေိုတော့ ထညျ့မပွောပါဘူး။) ဒါက ရညျးစားသကျတမျး ကွာလာရငျ မိနျးကလေးဆိုတာ တနျဖိုးကကြလြာတယျ ဆိုတဲ့ အမွငျနဲ့ ဆကျစပျတယျ။ မိနျးကလေးတှမှောလညျး ဒီအမွငျရဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျကွတဲ့အတှကျ နှဈတှကွောလာ၊ တဈယောကျကို တဈယောကျသိလာလို့ အဆငျမပွတေော့ဘူး ဆိုရငျတောငျ မပွတျရဲတော့ဘူး၊ ဒီလိုပဲ ကွိတျမှိတျနလေိုကျကွ၊ လကျထပျလိုကျကွ၊ ကောငျလေး မူမမှနျတော့တာကိုတောငျ အမြိုးမြိုး သညျးခံကွရနဲ့ ဖွဈကုနျတယျ။ အဲဒီလိုပဲ၊ ယောကျြားလေးတှကေိုလညျး သူမြားသားသမီးကို ဒီလောကျနှဈရှညျလမြား တှဲခဲ့ပွီး မယူသေးဘူးလားလို့ ပွောခံရတာပဲ။ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ လမျးခှဲလိုကျရငျလညျး လူမဆနျတဲ့ကောငျလို မွငျကွတာ။ တကယျတော့ သူတို့ဟာသူတို့ အဆငျမပွလေို့ လမျးခှဲလိုကျတာ၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ ပတျဝနျးကငျြကသာ အဲ့လိုမြိုးတှေ ပွောနကွေတာ။
တက်ကသိုလျကနေ ဘှဲ့ရလာရငျ မိနျးကလေးတှကေ ပညာဆကျသငျဖို့ အာရုံရှိနခြေိနျ၊ ယောကျြားလေးတှကေ ငှရှောဖို့ကို ပိုဦးစားပေးရတယျ။ ငါ သူမြားသားသမီးကို ယူပွီးရငျ သူ့အဖထေားတာထကျ မသာတောငျ တငျ့တငျ့တယျတယျလေးတော့ ထားနိုငျမှ ဆိုပွီးတော့ပေါ့။
မိသားစုတဈစုမှာ ယောကျြားက ပိုကျဆံရှာပွီး မိနျးမက အိမျထောငျမှု ထိနျးသိမျးတယျဆို အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘာမှမဖွဈဘူး။ ဘယျသူကမှလညျး မိနျးမကို ယောကျြားပုဆိုးနား ခိုစားတယျလို့ မပွောဘူး။ ဒါ သာမနျလို့ပဲ မွငျကွတယျ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ စိတျထဲမှာလညျး လုံခွုံမှုရှိတယျ။ ယောကျြားက အားကိုးရတယျပေါ့။ ပွောငျးပွနျအနနေဲ့ မိနျးမက ပိုကျဆံရှာပွီး ယောကျြားက နောကျကပံ့ပိုးပေးမယျ ဆိုပါတော့။ သူတို့ဟာသူတို့ အဆငျပွနေရေငျတောငျ ပတျဝနျးကငျြက ပွောကွမယျ၊ မိနျးမထမီနား ခိုစားတယျ ဆိုပွီး။
ယောကျြား တျောတျောမြားမြားကလညျး ဒီအခွအေနနေဲ့ ပတျသကျလို့ စိတျလုံခွုံမှု မရှိဘူး။ ကွာတော့ ဘယျလိုမှ သညျးမခံနိုငျတော့ဘူး။ သူ့ထကျသာနတေဲ့ မိနျးမဖွဈသူကို အလိုလိုနရေငျး ကွညျ့မရတော့ဘူး။ သူနဲ့အတူတှဲလိုကျတိုငျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလေးစားမှု ပြောကျလာတယျ။ ဒီတော့ ဘုရငျမနားကနေ ခှာပွီး မိဖုရားရှာတယျ။ ဒီမိဖုရားဟာ ဘုရငျမလောကျလညျး မလှဘူး၊ မတျောဘူး၊ ငှကွေေးမပွညျ့စုံဘူး၊ ဒါပမေယျ့ သူကတော့ ဘုရငျဖွဈခှငျ့ရတယျ။ ဒီလိုနဲ့ အိမျထောငျရေး ဖောကျပွနျတာတှေ ဖွဈလာတယျ။
ဒါတှကေ ကြှနျတျော စဉျးစားမိတဲ့ ဥပမာတခြို့ပေါ့။ သခြောဖတျကွညျ့လိုကျရငျ ဘာသှားတှမေ့လဲ ဆိုတော့ မိနျးကလေးတှကေို ထိခိုကျနဈနာစတေဲ့၊ ရုတျတရကျဆို ကြှနျတျောတို့ ယောကျြားတှေ အသာရနတေယျလို့ ထငျရတဲ့ ကိစ်စတှကေပဲ ကြှနျတျောတို့ကို ထိခိုကျစနေတော ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တနျဖိုးကို အပြိုစဈခွငျးနဲ့ တိုငျးတာနတောကပဲ ကြှနျတျောတို့ကို နှားဖွဈစတော၊ ခြိုပေါကျစတော။ နှဈတှကွောလာရငျ မိနျးကလေးက တနျဖိုးကလြာတယျ ဆိုတဲ့အမွငျကပဲ ကြှနျတျောတို့ကို နှမသားခငျြး မစာနာတဲ့သူတှေ ဖွဈလာစတော။ “စီးတဲ့ရေ ဆညျတဲ့ကနျသငျး” ဆိုတာက အမြိုးသမီးတှကေို ကိုယျပိုငျဝငျငှမေရှိ၊ ကိုယျ့ဟာကိုယျ မရပျတညျနိုငျတော့ဘဲ ယောကျြားအနိုငျကငျြ့သမြှ ငွိမျခံရတဲ့ လူတဈယောကျ ဖွဈလာစသေလို၊ ယောကျြားတှအေတှကျလညျး ငှရှောကောငျးရမယျ ဆိုတဲ့ ဝနျထုပျဝနျပိုးကို ဖွဈစတော။ ကိုယျမြား မတျောတဆ အသကျဆုံးပါးသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့သားသမီးတှနေဲ့ ကိုယျ့မိသားစုကို ဘာမှမလုပျတတျ မကိုငျတတျနဲ့ ဒုက်ခတှဖွေဈပွီး ကနျြခဲ့စတော။
ဒါကွောငျ့ ဒီလို လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးကွားမှာ ရှိနတေဲ့ အမွငျတှကေို ပွောငျးလဲပဈဖို့ဟာ အမြိုးသမီးတှအေတှကျပဲ လိုအပျတာ မဟုတျဘူး၊ အမြိုးသားတှအေတှကျလညျး လိုအပျတယျ၊ ဒီအမွငျတှကွေောငျ့ အမြိုးသမီးတှေ ထိခိုကျနဈနာရသလို၊ ဒီလိုဘောငျတဈခုထဲ အံဝငျခှငျကြ ဖွဈမနတေဲ့ အမြိုးသားတှဟောလညျး ကဲ့ရဲ့ပွဈတငျခံနရေတယျ၊ ဒီအမွငျတှကွေောငျ့ သူတို့တငျ ထိခိုကျခံစားနရေတာ မဟုတျဘဲ ကြှနျတျောတို့လညျး နဈနာနရေတယျ ဆိုတာကို သိစခေငျြပါတယျ။ နောကျပွီး အဲဒီအမွငျတှေ လြော့နညျးပပြောကျသှားဖို့ ကွိုးစားကွတဲ့ နရောမှာလညျး အမြိုးသားတှကေို ပူးပေါငျးပါဝငျစခေငျြပါတယျ၊ ဒါမှပဲ ပိုမိုအောငျမွငျမှု ရလာမှာဖွဈတယျ ဆိုတာကို နိုဝငျဘာ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ကရြောကျတဲ့ ဒီနှဈ နိုငျငံတကာ အမြိုးသားမြားနေ့ (International Men’s Day) အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ တငျပွဆှေးနှေးလိုကျရပါတယျ။
(၂၄.၁၁.၂၀၁၈ ထုတျ Voice Weekly ပါ ဆောငျးပါး)
Posted by Alex Aung at 5:00 AM No comments: